Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Alitalia airline: Waxay u xiran tahay ganacsi
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Laga bilaabo saqda dhexe, Ogosto 24, 2021, shirkadda diyaaradaha ee Alitalia ma sii iibin doonto tikidhada duulimaadyada dhacaya 15 -ka Oktoobar. Shirkaddu waxay emayl u diri doontaa macaamiisheeda kuwaas oo soo iibsaday duulimaadyo laga bilaabo Oktoobar 15, 2021, si ay u sii socdaan.
Waa maxay ikhtiyaaraadka macaamiishan iyo waxa ku dhacaya tigidhkooda oo ay hore u bixiyeen?
Macaamiisha waxaa la siin doonaa ikhtiyaarka ah inay ku beddelaan duulimaadyadooda (duulimaadyadooda) mid kale oo u dhigma oo ay maamusho shirkadda Alitalia Oktoobar 14, 2021.
Waxa kale oo suurtogal noqon doonta in macaamiishu helaan lacag celin buuxda ee tigidhkooda.
Ka dib markii uu ruqsadda hawlgalka iyo shahaadada wadaha diyaaradaha ka qaatay ENAC, Hay'adda Duulista Rayidka ee Talyaaniga 18 -kii Ogosto, ITA airline (Italia Trasporto Aereo), oo hore loogu yiqiin Alitalia, ayaa loo diyaariyay in si rasmi ah loo duuliyo. ITA waxay furi doontaa iibinta tigidhada laga bilaabo Ogosto 26.
Soo jeedinta wax -ku -oolka ah ee loo oggolaaday hantida duulimaadka Alitalia
Guddiga ITA, oo ku kulmay guddoomiyenimada Alfredo Altavilla, waxay go'aansadeen inay u beddelaan dalabkii aan ku xirnayn ee mar hore loo diray 16-kii Ogosto maamulka aan caadiga ahayn ee Alitalia si uu u noqdo mid ku-meel-gaar ah. Bixintaan waxaa ka mid ah 52 diyaaradood, boosas la xiriira, iyo sidoo kale qandaraasyo iyo hanti dheeri ah oo ka socota laanta Duulista si ay u bilowdo hawlgalinta Oktoobar 15.
Yaa maamuli doona adeegga macmiilka?
Hawlwadeenka xarunta macmiilka cusub ee ITA wuxuu noqon doonaa Covisian kaas oo adeegsada teknoolojiyadda daruuriga iyadoo lala kaashanayo la -hawlgalayaasha sida Salesforce iyo Amazon Web.
Intaa waxaa dheer, laga bilaabo Ogosto 26, goobta aruurinta codsiyada dadka xiiseynaya la shaqeynta ITA ayaa shaqeyn doonta. Waxaa xigi doona kulan lala yeesho ururada shaqaalaha si loo bilaabo wadaxaajoodka heshiiska shaqada cusub.
ITA si loo qiimeeyo shaqaalaha hadda jira shaqooyinka
ITA waxay hawlaheeda ku bilaabi doontaa 2,800 oo shaqaale ah. Waxaa laga akhrisan karaa isgaarsiinta ay shirkaddu u dirtay ururada shaqaalaha iyadoo la eegayo bilowga iska horimaadka. Xoogga shaqaalaha “markii hore lagama maarmaanka u ahaa bilowga waxqabadyada” waa “loo siman yahay, sida ku cad Qorshaha Ganacsiga, 2,800 oo shaqaale ah” ayaa lagu sharraxay ITA, oo leh “waa la heli karaa” si loo diyaariyo xoogga shaqaalaha ”sidoo kale waxaa la qiimeynayaa musharrixiin kasta oo ku jira shaqada la soo bandhigay shaqaalaha Alitalia Sai ee hadda jira. ”
Qorshaha Ganacsiga wuxuu bixiyaa in shirkaddu “ay markii dambe kordhin karto shaqaalaha bilowga ah” illaa “ay gaaraan tirada ugu badan ee qiyaastii ah 5,750 shaqaale marka la gaaro 2025. Dhanka kale, ITA waxay ku dhawaaqday in dhammaan shaqaalaha la codsan doono inay helaan anti-COVID Green Pass.
Aqoonsiga alaab -qeybiye diyaaradeed oo istiraatiiji ah
ITA waxay ku celisay go'aankeeda ah inay ka dhigto maraakiibteeda mid isku mid ah inta lagu gudajiro qorshaha warshadaha iyo, ilaa dhammaadkan, si loo bilaabo hannaanka cusboonaysiinta maraakiibta bilowga sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, iyada oo lagu beddelayo jiil cusub oo ah diyaarad aad u hufan .
Go'aanka ku saabsan halabuurka maraakiibta mustaqbalka ayaa la qaadan doonaa oo lagu wargelin doonaa Sebtember. ITA waxay sidoo kale bilaabaysaa barnaamij daacadnimo cusub “safka hore ee tayada adeegyada la siiyo macmiilka, laga yaabo inay la jaanqaadi karaan kuwa shuraakada kale ee warshadaha” marka la eego in xeerarka Yurub ay ka horjoogsanayaan shirkadda cusub inay awood u yeelato inay u tartanto helitaanka Alitalia Barnaamijka MilleMiglia.